Tsvaga akanakisa nudist mahombekombe muTenerife | Kufamba Nhau
Tenerife nudist mahombekombe
Susana Garcia | | General, Beaches, Tenerife
La Tenerife chitsuwa ndiyo imwe yenzvimbo dzinotsvakwa zvakanyanya muSpain yemamiriro ekunze akadziya mukati megore uye nenhamba huru yemabhishi ainayo. Mazhinji eaya mahombekombe asina kupfeka uye anokutendera kuti uite naturism wakanyarara uchifarira zuva uye kushambira kwakanaka. Kana iwe uchizoshanyira chitsuwa iwe ungangoda kuziva zvishoma zvishoma nezve nudist mahombekombe ainayo uye nezvavanopa.
ari mahombekombe asina kupfeka anogona kupa pachena nudism kana kuve nzvimbo idzo nudism inoitwa nenzira yekusungirwa. Ruzhinji rwavo runokutendera iwe kusarudza zvakasununguka kuti ndiani anoishanyira, kunakidzwa nesarudzo dzese. Tichaona izvo chitsuwa cheTenerife muCanary Islands chinogona kutipa isu maererano nemahombekombe enudist.
1 La Tejita Gungwa
2 Los Morteros pamhenderekedzo
3 La Pelada Gungwa
4 Red Mountain Gungwa
5 Patos Gungwa
6 Las Gaviotas gungwa
7 Benijo Gungwa
La Tejita Gungwa
La Tejita igungwa rine jecha rinotambanukira padyo neRed Mountain, inova imwe yeakanyanya hunhu echitsuwa icho chinogona kuoneka kubva mudenga. Iri gungwa rinomiririra mvura yaro yakachena uye kuva nzvimbo yekufambisa, nekuti kazhinji ine mamwe mafungu nemhepo. Saiti inofanirwa kushanyirwa, kunyangwe paine mamwe mahombekombe akavharika, asi mune chero mamiriro ezvinhu anomira kunze kwenzvimbo iyo iri uye nekuve mumwe weakakurumbira.
Los Morteros pamhenderekedzo
Iri gungwa riri mune diki bay, saka iri padhuze uye inogamuchirwa kupfuura mamwe makuru. Iri pedyo ne Nzvimbo Yemasikirwo emawere emaLa Caleta uye kuguta kwemaguta kune zita rimwe chete, inova nzvimbo yakanaka yekugara. Cove iyi yakasarudzika kana tikachienzanisa nevamwe asi inonakidza kwazvo uye yakanyarara, saka inokosha. Iyo inzvimbo yakachengetedzwa yechisikigo uye nekudaro tinozozviwana tiri munzvimbo yakanaka kwazvo umo nudism inogona kuitiswa. Uye zvakare, inopa yakajeka kristaro mvura yakakwana kune snorkeling kana kudhizaina.
La Pelada Gungwa
Ichi chitsuwa chine makovha mazhinji nekuda kwekukukurwa kwegungwa padombo rinoputika pamusoro pemakore, saka rinotipa nzvimbo zhinji dzekuitira nudism nenzira yakanyarara. La Pelada pamhenderekedzo iri kungopfuura nzvimbo yeEl Médano uye idombo diki pakati pematombo nejecha dema rechitsuwa uye nehurefu hwemamita makumi masere. Iyo diki asi inodziya, haina masevhisi asi unogona kusiya mota yako padhuze saka inogona kuve sarudzo yakanaka kana iwe usingade kufamba zvakanyanya.
Red Mountain Gungwa
Iyi mahombekombe inogona kuoneka paunouya kuchitsuwa nekuti iri padyo nendege. ndinoziva nezvegomo rinoputika rinonzi Gomo Dzvuku izvo chaizvo zvine hunhu uye izvo zvinomira pachena munzvimbo. Iri gungwa rinotipawo mukana wekuita nudism mune yakasarudzika nzvimbo nharaunda yatisingakwanise kuwana muPeninsula, saka hatifanirwe kuzeza kuisvika. Iyo cove inozivikanwa sePlaya de Montaña Roja inzvimbo yepedyo zvakanyanya kupfuura pamhenderekedzo yeLa Tejita inotambanuka padyo negomo uye inozivikanwa zviri nani. Mune zvese iwe unogona kuita nudism kunyangwe ichi chidiki chechi munzvimbo ine matombo chiri kugamuchirwa.
Ichi ndicho yemahombekombe emahombekombe inoonekwa seimwe yeakanakisa muTenerife kuita nudism. Crystal yakajeka mvura, jecha rakasviba uye makomo akasvibira ayo anomira kunze uye anogadzira musanganiswa unoshamisa wemavara ayo anoshamisa zvechokwadi uye akasarudzika. Iyo iri padyo neAncon kumahombekombe, akapatsanurwa nemubhedha. Iri gungwa reOrotava rakanaka chaizvo asi iwe unofanirwa kungwarira paunenge uchigeza mumasaisai saka haina kukodzera zvakanyanya kumhuri.
Las Gaviotas gungwa
Kana iwe ukapfuura pamhenderekedzo yeTeresitas, inozivikanwa pachitsuwa, unofanirwa kumira kuPlaya de las Gaviotas, uko nudism inobvumidzwa. Yakakomberedzwa mamwe mawere anoyevedza uye nudism maharandiko kuti, tinogona kupfeka swimsuit kana kwete. Chinhu chete chinokanganisa ndechekuti pamafungu epamusoro idiki, asi kana tikaenda kumvura yakadzika tinogona kuinakidza zvirinani. Iyo inongori 250 metres kureba asi igungwa kure nenzvimbo dzevashanyi munzvimbo yakanyarara uye ndosaka ichi chingave chakanakirwa kunakidzwa nezuva rakasununguka pamhenderekedzo.
Iri gungwa rine mukurumbira chaizvo uye rinomira kunze naRoque Benijo naRoque la Rapadura. Ichi chifananidzo chinozivikanwa cheTenerife uyezve rimwe gungwa re nudism. Mahombekombe emusango ane jecha dema uye mafungu mazhinji atisingakwanise kupotsa patinoenda kuchitsuwa. Ichowo inzvimbo yakakwana yekunakirwa nekuvira kwezuva kwakanaka.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kufamba Nhau » General » Tenerife nudist mahombekombe